Njalo plus [ezikhanyisayo lesikweletu kuphela]
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Njalo plus [ezikhanyisayo lesikweletu kuphela]
inani lenzalo yonyaka
nge uhlelo ngaphandle ukuze uqhubeke ukukhokha ngendlela eqondile yomugqa isisekelo uthishanhloko. It usefunde buyiselo yayo indlela ebizwa ngokuthi "Maipei kube ribonucleic". inkokhelo yanyanga zonke, ungabeka Isamba esiphansi senkokhelo kusukela 5000 yen, okuyinto imali kanye nenzalo isibe isimiso ezidonswe.
Esikhathini "Maipei kube ribonucleic", uma inkokhelo inani lemali elincane imali noma ngaphezulu, futhi ungakwazi ukukhokhela ukuze ivumelane lula umsebenzisi inani eligcwele ngisho kancane. Inani elishiwo lwemali okwabangelwa contact Internet kanye ngocingo. Futhi, uma une-ukubuyiswa kwemali isikhathi esingaphezu 5000 yen, njengoba esekelwe nemali kanye nenzalo kule nemali, ungase futhi ukunciphisa, uma kungenzeka futhi wanezela. Ungase futhi kalula bebonke ukukhokha lemali egcwele. 800,000 yen kusukela
Njalo Plus, ngekhadi lesikweletu ukuthi Sumitomo Mitsui Banking Corporation ikhiphe, kuyinto ezikhanyisayo lesikweletu kuphela ikhadi. Hhayi Imali yonyaka, ungajoyina ngaphandle abafundi basesikoleni esiphakeme uma egcwele engu-18 ubudala noma ngaphezulu. It is a sici enkulu elingase ikhokhwe at ijubane lakho siqu.
buyiselo usuku njengoba izinsuku 26 nyangazonke, lapho kufanele abuyisele $ 50 flat-isilinganiso, isibonelo, uma kucatshangwa ukuthi ukusetshenziswa 50,000 yen ngoJuni 15, kuya ku-July 26, okuyinto senkokhelo usuku lokuqala ngaphandle kwenzalo 5000 yen eyabiwe kuthishanhloko, isibe ukhokhe yen 5110 plus 110 yen isithakazelo ngenyanga ezayo ngo-August 26.
uma kukhona izimali lokwengamela elandelayo ka-September 26, ungakwazi ukukhokhela emuva ngendlela ukukhokha inani kuya 675 yen kwezinhloso zenzuzo ukwandisa plus ezingaphezu kuka-5000 yen. Ngenxa interest kuyinto inani lenzalo yonyaka 18 amaphesenti intshisekelo ribonucleic ka, njengoba credit card of ezikhanyisayo credit, kodwa isethwe ephakeme, le degree ephakeme senkululeko ngo indlela ikhadi lokukhokha okungavamile ukuba likhithike, liye esikalini ngaleso sikhathi.
Empeleni, noma ngenyanga ezayo izinsuku ezingu-10 ukuba akhokhe nyangazonke izinsuku ezingu-15 qinisa, bese ukhetha i-ngenyanga ezayo izinsuku 26 ukukhokha ekupheleni kokuqina. V ISA ihlangene, iyatholakala phesheya kanye ezifuywayo. Kungasetshenziswa futhi nemali electronic, ungakwazi ukusizakala iD futhi Waon, njengoba Visa payWave.
Inthanethi zingenziwa ukuqedela isicelo, ekhishwe amakhadi emfushane izinsuku ezintathu, uzothola ngakwesokunene esikhathini esingangesonto. Isethi ye-akhawunti debit ingasethwa on inetha, ungabhalisela kalula ngaphandle kokuphazanyiswa isignesha futhi usigcine.
iphuzu ukunciphisa izinga uphakeme, wonyaka Imali credit card isibe eliphakeme ukunciphisa izinga 1.5%. Khomba emakethe ANA Rakuten, ungase uyishintshe amaphuzu Amazon kanye Yahoo yezitolo amaphuzu.
BIC kanye Muji, ungase futhi ukushintshanisa amaphuzu ezifana Nissen. 1 iphuzu uthole ngayinye 1,000 yen yezitolo ikhadi, iphuzu uye enyangeni lapho isithakazelo ribonucleic livelile kuyoba ezintathu-emhlanjini. Dlulisa amaphuzu nezinye izinkampani we ikhadi iyatholakala. Uma
lesikweletu ukuze laba bantu, futhi abakholelwa ukuthi elihle lingcono ngoba amadili kungenzeka, ukukhokha ikhadi ukuthi kufanelekile abantu abhekwa ikhadi ezinhle esikhundleni sokufaka imali. Izisebenzi umsebenzisi ezikhokhelwayo Kuye kuthiwe kukhona abaningi, labo abenza konke lekhadi uye wathola kokuhlaziywa okusezingeni eliphezulu. Ngoba lungasetshenziswa nemali electronic, ungabhalisela azidingi settlement yesibili at lula ezitolo nezitolo ezinkulu. Kuyinto ikhadi elula kakhulu. Sekuvele 5%. Khomba emakethe ANA Rakuten, ungase uyishintshe amaphuzu Amazon kanye Yahoo yezitolo amaphuzu.
lesikweletu ukuze laba bantu, futhi abakholelwa ukuthi elihle lingcono ngoba amadili kungenzeka, ukukhokha ikhadi ukuthi kufanelekile abantu abhekwa ikhadi ezinhle esikhundleni sokufaka imali. Izisebenzi umsebenzisi ezikhokhelwayo Kuye kuthiwe kukhona abaningi, labo abenza konke lekhadi uye wathola kokuhlaziywa okusezingeni eliphezulu. Ngoba lungasetshenziswa nemali electronic, ungabhalisela azidingi settlement yesibili at lula ezitolo nezitolo ezinkulu. Kuyinto ikhadi elula kakhulu.